रोचक | युनिभर्सल खबर | Page 2
के तपाईलाई थाहा छ? ओठबारे १५ रोचक तथ्यहरु
Posted By: युनिभर्सल खबरon: January 07, 2018 In: बिबिध, रोचक
मानव शरीरका अंगमध्ये ओठ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । सौन्दर्यमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने ओठ व्यक्तिअनुसार विभिन्न आकारका हुन्छन् । तर, ओठबारे कैयौँ तथ्य छन्, जुन तपाईं अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्...	Read more
Posted By: युनिभर्सल खबरon: January 06, 2018 In: बिबिध, रोचक
वैवाहिक जिवनमा निरासा तथा बेमेलको कुरा नौलो होइन, विश्वव्यापी सनातन सत्य हो । तर लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेझैँ धेरै दम्पतिको हकमा यस्तो झगडा छिटै सामसुम भैहाल्छ अनि हठात् अँगालोमा...	Read more
हरेक व्यक्तिको जिवनमा यौन भन्ने कुरा एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसकारण यौन तथा प्रजननका विषयमा जानकारी पाउनु हरेक व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । समाज विकशित हुँदै गएको भएपनि यौनका विषयमा ध...	Read more
कुनै सुन्दर युवतीलाई देख्दा पुरुषको पहिलो नजर युवतीको कुन अंगमा पर्ला ? पहिलोपटक कुनै महिलालाई भेट्दा पुरुषले झ्वाट्ट कुन अंगमा नजर डुलाउला ? धेरैको उत्तर हुनसक्छ वक्षस्थल । तर एक अध्ययनले भ...	Read more
यस्तो गाउँ, जहाँ आत्महत्या गर्न आउँछन् चराचुरुंगीहरु
छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ जुन विश्वभरका चरा वैज्ञानिकहरुका लागि समेत रहस्यको केन्द्र बनेको छ । किनकि त्यो गाउँमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा चराहरु आत्महत्या गर्न जान्छन् । भारतको असाम...	Read more
अनौठो कम्पनी, जहाँ राम्रो काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई थप्पड हानिन्छ (भिडियोसहित)
कुनै पनि कम्पनीमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्ने चलन त सामान्य हो । तर चीनको एक कम्पनीमा चाहीँ अनौठो नियम छ । ब्युटी तथा स्किन प्रडक्ट बनाउने एक चिनियाँ...	Read more
दुनियाँमा एउटा यस्तो वेश्यालय पनि छ जहाँ ग्राहकले पैसा नतिरिकनै यौनक्रिडा गर्न पाउँछन् । उक्त वेश्यालयका यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । बस्, त्यहाँ ग्रा...	Read more
यस्तो समाधीस्थल, जहाँ फूल होइन चुरोट चढाइन्छ
समाधीस्थलमा फूल, अगरबत्ती, खादा आदि चढाउने चलन छ । तर भारतको उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनउमा रहेको एक समाधीस्थलमा चाहीँ मानिसहरुले फूल, अगरबत्ती र खादा होइन चुरोट चढाउने गर्छन् । उक्त समाधीस्थल...	Read more
ताइवानमा एक हैरान लाग्ने घटना सार्वजनिक भएको छ । एकजना व्यक्तिलाई यस्तो हालतमा अस्पतालमा ल्याइयो कि जसलाई देख्दैमा सबै अचम्ममा परे । तर, वास्तवमा ती मानिसमाथि जुन बज्रपात भएर अस्पताल ल्याइएक...	Read more
गर्भनिरोधका लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन कण्डमको आविष्कार कहिले भएको होला ? यो चासो धेरैको हुनसक्छ । इतिहास खोतल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले फ्रान्सको एक गुफामा कण्डम आकारको चित्र फेल...	Read more
भोजपुरमा वडाध्यक्ष माथी कुटपिट
काठमाण्डौंमा यौन शक्ति बढाउने सामग्री बेच्ने १६ जना पक्राउ
एकजना व्यक्तिले बिस्कुट खुवाएर मोहनी लगाएका कारण बेहाल कविताको जीवनमा सुधार